Nevis Trust - Mid ka mid ah Qalabka Badbaadinta Hantida
Nevis Trust ee Ilaalinta Hantida ee Sharciyada
Khabiiro badan oo hanti dhawr ah ayaa isku raacay in mid ka mid ah hantida ugu xoogan ee hantida magangelyadu ay tahay kalsoonida caalamiga ah ee Jasiiradda Caribbean ee Nevis. Nevis waxay ku taala Koonfur-bari ee Florida. Waxay leedahay taariikh aad u xoogan oo ku saabsan hantida magangelyada. Maaha oo kaliya aragti laakiin mar kasta oo aan aragno waxa la tijaabiyey wuxuu ilaaliyey hantidayada macaamiisha.
Waxaan ku jirey ganacsiga ilaalinta hantida tan iyo 1991. Shirkadeena waxaa lagu aasaasay 1906. Waxaan ku bartaa siminaarro shirkado kale sida qareenkooda iyo CPAs iyo sidoo kale ganacsatada, Waxaan aaminsanahay inaan haysanay macaamiisha 65,000 ee ku jira xogahayaga oo waxaan si cad u dhisnay kumanaan shirkado iyo shirkado sannado badan.
Haa, waxaa jira sugitaano gudaha ah. Laakiin haddii aad barato kiiska sharciga iyo aragtida kordhaya ee sharciga mas'uulka ka ah ... waxaad arki doontaa in garsoorayaal natiijooyin badan oo ku-jihaysan.
Sababta kalsoonida caalamiga ah ee ay ka shaqeynayaan maxaabiista gudaha ayaa ah in maxkamada maxalliga ah ay sheegto, "Ii lacagi." Wakiilku, oo ah Nevis Island Law Firm uu ka baxsan yahay maxkamad maxkamad maxaliga ahi maahan inaad u hoggaansamayso ... maxkamadeyntaada maxalliga ah ma laha awood sharci ah Nevis.
Gargaarka Nevis Trust
Halkan qaar ka mid ah faa'iidooyinka Nevis kalsooni:
1. Dayn-bixiyuhu waa inuu ku dhejiyaa $ 100,000 USD oo dawlada Nevis ka hor inta aan la qaadin tallaabo sharci ah oo ka soo horjeeda kalsoonida caalamiga ah sida sharciga waafaqsan yahay 2015. 2018, xitaa way ka fiican tahay. Maxkamadaha Nevis hadda waxay dhigi karaan debaajiga xitaa ka sarreeya xaddiga $ 100,00. (Mararka qaar waxay ku dhigan karaan debaajiga hoose).
2. Si ka duwan dalalka intooda badan, kalsoonidii Nevis ayaa si aan kala go 'lahayn u sii socon karta.
3. Nevis ma aqoonsana xukunka ajnabiga ah. (Dhab ahaantii, waa mid ka mid ah dalal yar oo bixiya lacagtaas.)
4. Sharcigu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad laba isku-dar ah isku-geeysatid hal ama kalsooni isku-kalsooni laba.
5. Haddii dayn bixiyuhu keeno tallaabo wareejin been abuur ah waa inay sameeyaan sanad gudaheeda sababaha falka - ama sababta dacwada loo xeray meesha ugu horeysa ... sida burbur baabuur. Maxkamadaha Nevis xitaa ma maqli doonaan kiiska. Sidaa darteed, waa faa'idadaada si aad u dhisto kalsoonida sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah oo u hesho saacad sax ah.
6. Dhacdadan aadka u daran ee deynta ah, waxay u baahan yihiin inay diraan dammaanad $ 100,000 USD iyo kiiskoodu ka shakiyaan shaki macquul ah iyo caddayn cad oo qancin ah in Hesloorku uu aasaasay kalsoonida inuu lacag ka haysto deyntaas gaarka ah. Tani waxay ka dhigan tahay haddii haddii Xisbigu uu dejiyo kalsoonida sabab kasta oo kale, sida kala-duwanaanta caalamiga ah, qorsheynta guryaha, iwm, waxay noqoneysaa mid aad u adag in dayn-bixiyuhu ka adkaado. Waxaa intaa dheer, dayn-bixiyeyaashu waxay halis ugu jirtaa inay dhisto $ 100,000 USD.
Trust Trust - Sida ay u Shaqeyso
Hadda, sharciga ku kalsoon wuxuu adeegsanayaa "tallaabada loo galo kabaha deynta" aragtida. Wax kastoo uu debciga u qaban karo si toos ah, dayn-bixiyuhu wuxuu u qaadi karaa kabaha ama kabaha isla markaana sameeya isla sidaas. Sidaas darteed, waa sababta ay muhiim u tahay in xirfadle khibrad leh uu soo saaro kalsoonida Nevis iyo inaad haysato wakiil shahaadeysan sida shirkadeena Nevis Law.
LLC Gudaha Trust
Hadda, marka aan samayno kalsoonida, waxaan rabnaa in aan macaamiisheena siin karno xakamaynta fog. Marka, kalsoonidu waxay leedahay 100% Nevis LLC waxaananu kuu sameynaa maamulaha. Hadda, macaamilka ayaa ah maamulaha shirkadda LLC oo kantaroolaya hantida JFKA waana bilowga astaamaha dhammaan xisaabaadka.
Koontadaada uma baahnid inaad ku jirto Nevis, laakiin waxay ku jiri kartaa hay'ad maaliyadeed oo caalami ah oo bixisa meel dhaqaale oo ammaan ah.
Hadda, marka "wax xun xun" ay dhacaan, waxaad si ku meel gaar ah u heli kartaa talaabadayada sharciga ee shirkadda sharciga ee LLC. Haatan, wakiilka ayaa ah shirkad sharci oo sharciyaysan oo sharciyaysan. Waxaa intaa dheer, waxay raaceen jadwalka taariikhda aasaasiga ah si loo helo laysanka wakiilka. Iyadoo la dhajiyey waxaan loola jeednaa in macaashku caymis yahay.
Sidaa darteed, amniga macaamiisha iyo nabadgelyada maanka, mar keliya oo keli ah sharciyadayada tallaabooyinka ay tahay marka maxkamaduhu qaadanayaan lacagta.
Nabdoonaanta Badbaadada Nabadgelyada ee Dhulka
Sidaa darteed, su'aasha la weydiiyay waa, "Maxaad u malayn lahayd, 100% fursadda maxkamadaynta qaadashada lacagta? Mise halkii aad haysato shirkad sharciyaysan, oo aan waligeed qaadan macaamiisha lacagta, samee waxa aad bixisay si ay u sameeyaan ... .Ka difaacaan lacagtaada? "
Marka ay "wax xun xun" ka baxaan xakamaynta xakamaynta - maamulka macaamiisha LLC gudaheeda kalsoonida - waxay kugu soo noqotaa adiga oo ku soo laabta kursiga darawalka oo dhan oo dhan.
Waqtigaas, inta lagu jiro xaalad sharci, haddii aad leedahay biilal, wakiilka ayaa kaa bixin kara adiga. Waxaad haysan kartaa wakiilka ayaa kaa bixinaya saaxiib ama qof qaraabo ah oo ku kalsoon oo lacag kuu siinaya, iwm. Weli waxaad haysan kartaa lacagtaada ... hase yeeshee cadawgaaga maaha.
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah in wax walba oo aad ka shaqeysay aad u adag tahay ammaan iyo ammaan. Ilaalinta ugu wanaagsan ee hantida macaamiisha ah ee lagu kalsoon yahay waxay ku xirantahay hantida dareeraha ah ee laga hago badda Maxkamadaha Maraykanku waxay leeyihiin awood ay leeyihiin bangiyada Mareykanka iyo hantida maguurtada ah.
Ilaalinta hantida hantida maguurtada ah
Sidaa daraadeed, hanti ma guurto, waxaan qabannaa waxa loo yaqaan 'Equity stripping'. Waxaanu diiwaangelinaa deymaha ka soo horjeeda hantida loo dhiibo LLC. Kadib, haddii loo baahdo, waxaan leenahay koox saddexaad oo iibsata lacagta deynta ah oo aad u gudbiso xisaab galka koontada aan geli karin kalsooni dibadeed.
Waxaanu samaynay dhowr arrimood oo kalsooni ah oo ku saabsan qareenada. Kadibna qareenadu waxay u kala qaadaan $ 30,000 ilaa $ 50,000. Nala soo xiriir si toos ah waxaanan samayn karnaa kalsoonida qiyaastaas. Fadlan naga soo wac mid ka mid ah lambarada kor ku xusan ama buuxi foomka wadatashiga bilaashka ah ee boggan.